Kalkaaliso caafimaad oo dhaliishay sida loo karantiilay - BBC Somali
Kalkaaliso caafimaad oo dhaliishay sida loo karantiilay
Image caption Cudurka Ebola waxa uu galaaftay nolasha dad badan galbeedka Afrika.
Gabar kalkaaliso caafimaad ah oo u shaqaysa hay'adda MSF ee dhaqaatiirta aan xudduudda lahayn oo lagu karantiilay garoon ku yaala dalka Maraykanka kaddib markii ay qof qaba cudurka Ebola ku daweysay dalka Sierra Leone ayaa sheegtay in loola dhaqmay sida qof dambiile ah.
Gabadhan ayaa sida la sheegay ka soo noqotay galbeedka Afrika oo la sheegayo in ay ka shaqaynaysay adeegyada caafimaadka ee cudurka Ebolaha looga hortagayo.
Sharci cusub oo dhowaan lagu soo rogay garoomada diyaaradaha ayaa dhigaya in la baaro lana geeyo meel khaas ah muddo saddex isbuuc ah qof walba oo galbeedka Afrika ka taga, wax xiriir ahna la yeeshay qof qaba cudurka Ebola, xitaa haddii qofkaasi laga waayo astaamaha cudurkani Ebola.
Gabadhan oo lagu magacaabo Kaci Hickox ayaa sheegtay in ficilada baaritaanka noocan ah uu shaqaalaha caafimaadka ka hor istaagayo in ay dadka Ebolaha qaba caawiyaan.